Dhageyso:-Ugu yaraan afar qof ayaa u geeriyootey 40 meeyo kalena wey u ildaran yihiin degmada buur hakaba | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:-Ugu yaraan afar qof ayaa u geeriyootey 40 meeyo kalena wey u ildaran yihiin degmada buur hakaba
Ugu yaraan afar qof ayaa u geeriyootey 40 meeyo kalena wey u ildaran yihiin waxeyna ay u jifaan xaruumaha cafimaad ee ku yalaan degmada buur hakaba ee gobolka baay kadib markii labadii isbooc ee lasoo dhaafey degmada buur uu ka qarxadey cudurka shubun biyoodka.
Degmada Buur Oo ah degmada Dalka Somaliya Ugu Tuulada badan ayaa qaar kamid ah dadkii ku nolaa degaanadaasi ayaa waxaa ay usoo barakaceyn degmada buur kadib markii ay lakulmeen xaalado bini’aadinimo ah.
Ciise nuur maxamed waxaa uu dhaqtar kayahay mid kamid ah isbitaalada ku yalaan degmada buur hakaba waxaa uu kawarbixiyey tan iyo markii uu degmada buur uu kaqarxadey cudur ka shuban biyoodka dadka lasoo gaarsiyey isbitaalka dhimashada iyo kuwa kale ee ujiifa cudurkaasi.
Sidoo kale dhaqtarka ayaa waxaa uu sheegey in isbitaalka aysan yaalin daawooyin ku filan dadka hada jifaan isbitaalka waxaana uu sheegey in dad horle maalin waliba ay soo gareyaan isbitaalka.
Dhageyso:-Ugu yaraan afar qof ayaa u geeriyootey 40 meeyo kalena wey u ildaran yihiin degmada buur hakaba was last modified: February 5th, 2017 by warsan radio